सोच्नुहोस् फ्लैश भण्डारण धेरै महँगो छ? फेरि सोच्नुहोस् - NAB प्रसारण बिट द्वारा समाचार, सरकारी प्रसारणकर्ता NAB शो - NAB शो लाइभ
घर » सामाग्री रचना » सोच्नुहोस् फ्लैश भण्डारण धेरै महँगो छ? फेरि सोच्नुहोस्
जेसन कोइरा, ग्लोबल निर्देशक, उत्पादन र समाधान मा मार्केटिंग क्वान्टम
सबैले फ्लैश बकाया प्रदर्शन प्रदान गर्न सक्छन् भन्ने कुरा बुझ्दछन्। र केहि प्रक्रियाहरु र कार्यप्रवाह को लागि, कि किस प्रकार को प्रदर्शन स्पष्ट रूप देखि अपरिहार्य छ। उदाहरणको लागि, जब सम्पादकहरूले असम्पीडित 4K (वा प्रायः प्राय: 8K) भिडियोको धेरै स्ट्रिमहरूसँग काम गरिरहेका छन्, फ्याटले सबैभन्दा सम्मोहक सामग्री सिर्जना गर्न आवश्यक प्रतिक्रियाजनक अनुभव प्रदान गर्न सक्छ।
तथापि, त्यहाँ मीडिया र मनोरञ्जन उद्योगमा व्यापक धारणा छ कि फ्लैश प्रविधि निकै महँगो छ। कहिले क्वान्टम उत्तर अमेरिका, यूरोप र एशियामा पोस्ट-प्रोडक्शन हाउसहरू, प्रसारण संस्थाहरू, रचनात्मक एजेन्सीहरू, स्टुडियोहरू र सामग्री डिलिवरी फर्महरू, सर्वेक्षण गरिएका भिडियो व्यवसायीहरू - फ्याफ-आधारितका आधे भन्दा बढी फ्लैश-आधारित समाधानहरू तैनात गर्न प्राथमिक ख्यातिको रूपमा खरिद गरे।
यो केवल एक आंशिक सत्य हो, र एक मात्र छ जसले आधा कथा बताउँछ। सबै फ्लैश भण्डारण समाधानको लागत अधिक महसुस हुनेछ जब विश्लेषण केवल HDD आधारित बनाइएका SSD आधारित समाधानको लागि क्षमता ($ / TB) क्षमताको तुलनामा तुलनात्मक मूल्य बिन्दुहरू मानिन्छ। तथापि, जब स्वामित्वको कुल लागत (TCO) मा फैलिएको छ, प्रदर्शन घनत्व उल्लेख गर्दैन, फ्लैश भण्डारणको अर्थशास्त्र, र विशेष गरी गैर-अस्थिर स्मृति एक्सप्रेस (NVMe) फ्लैश भण्डारण, सम्भव हुन्छ।
पहिलो कुरा पहिलो - NVMe के हो?
NVM को परिचय सम्म, धेरै फ्लैश-आधारित स्टोरेज - जस्तै ठोस अवस्था ड्राइव (SSDs) - कम्प्यूटरको बायाँको साथ भण्डारण जडान गर्न SATA वा SAS प्रविधिहरू प्रयोग गर्थे। तर SATA र SAS प्रारम्भमा हार्ड डिस्क ड्राइवहरू (HDDs) लाई समर्थन गर्न डिजाइन गरिएको थियो, र निर्माताहरूले नयाँ, छिटो फ्लैश-आधारित ड्राइभहरू विकास गरे, यी पुराना प्रविधिहरूले SSD हरू प्रदर्शन गर्छन्।
NVMe विशेष गरी फ्ल्यास-आधारित भण्डारणको लागि डिजाइन गरिएको थियो। NVMe को साथ, प्रत्येक CPU कोर स्पीड SATA या SAS इंटरफेस को बजाय उच्च गति PCIe बस को उपयोग गरेर संग्रह संग सीधा संवाद गर्दछ। PCIe प्रयोग गर्दै, फ्लैश-आधारित ड्राइभहरूले पारंपरिक HDD को सट्टा मेमोरीमा प्रदर्शन गर्दछ। NVM ले प्रति रेखा धेरै आदेशहरू साथै साथ SATA वा SAS प्रोटोकॉल भन्दा संचार लेनहरूको समर्थन गरेर उच्च प्रदर्शनलाई प्राप्त गर्दछ। SATA र SAS प्रत्येकसँग एकल आदेश लामहरू छन्, जुन क्रमशः 32 र 254 आदेशहरू गर्न सक्दछ। यसको विपरीत, NVMe लगभग 65,000 कतारहरूलाई लाममा 65,000 आदेशहरूको साथ समर्थन गर्न सक्छ।
SATA र SAS को तुलनामा, NVMe ले महत्त्वपूर्ण छिटो यादृच्छिक पढ्ने अनुरोध सक्षम गर्दछ। NVMe प्रति 1 लाख अनियमित पढ्न सक्दछ, प्रति 50,000 र SAS मा SATA सँग प्रति सेकेंड लगभग 200,000 प्रति सेकंड यादृच्छिक पढ्न। र, ती सबै पढेर पनि, NVMe 20 माइक्रोसेकेन्ड अन्तर्गत विलम्बता राख्छ, तुलनात्मक रूपमा SATA र SAS को लागि 500 माइक्रोसेक्सन। तीका लागि
भण्डारण प्रयोग गर्न एकाधिक ग्राहकहरूलाई डेटाको समानांतर स्ट्रिमहरू चाहिन्छ, समर्थन गर्नका लागि, एसएसडीहरू एचडीडीका रूपमा असाध्यै प्रभावकारी हुन्छन्।
NVMe एक नेटवर्क मा असाधारण throughput पनि वितरित गर्न सक्छ। आन्तरिक परीक्षणमा क्वान्टम, NVMe भण्डारण NNS र SMB संलग्न ग्राहकहरूको तुलनामा 10 भन्दा बढी एक एकल क्लाइन्टसँग पढ्न र इन्पुट प्रदर्शन प्रदर्शन लेख्न पाए।
NVMe एक फ्लैश प्रविधि हो जसले प्रयोगकर्तालाई फ्लैशको साँचो सम्भावना अनलक गर्न अनुमति दिन्छ, तर TCO को कम गर्दा गर्दा त्यसो गर्न। प्रति लाम अधिक आदेशहरूको फाइदा, छिटो पढ्न, कम विलम्बता र असाधारण throughput जोड्न र NVMe लाई सम्भावित लागत र मूल्य फाइदा वितरण गर्न सक्षम पार्दछ।
विगतमा, सञ्जाल भण्डारणको लागि फ्ल्यास प्रयोग गरी आंशिक रूपमा लागत निषेधित गरिएको थियो किनभने संगठनहरूले उच्च प्रदर्शन फाइबर च्यानल कनेक्टिविटी प्रयोग गर्थे। सञ्जाल सामान्यतया भण्डारण मिडिया पछि दोस्रो ठूलो खर्च हो, र ईथरनेट भन्दा बढी फाइबर च्यानल सञ्जाल तीन देखि चार गुना अधिक महंगा हुन सक्छ।
NVMe संग, संगठनात्मक फाइबर च्यानल जस्तै प्रदर्शन धेरै अधिक लागत प्रभावी ईथरनेट प्रविधि प्रयोग गरेर प्राप्त गर्न सक्छन्। इथरनेट टेक्नोलोजीले प्रयोगकर्ताहरूलाई न केवल उपकरणहरूमा मात्र व्यवस्थापनमा पनि बचत गर्न अनुमति दिन्छ, किनभने इथरनेट व्यवस्थापनले फाइबर च्यानल व्यवस्थापनको विशेष क्षमताको आवश्यकता पर्दैन। संगठनको साइजको आधारमा, इथरनेट प्रयोग गरी नेटवर्किंगमा दसौं हजारहरू - वा सैकड़ों हजारौं डलर पनि बचत गर्न मौका हो।
ती बचतहरू प्रायः NVMe भण्डारणमा लगानी ओभरसेट गर्छन्।
NVMe विचार गर्दा, यो सबै वा केही हुनुपर्दैन
जब मान्छे NVMe को बारे मा सोचते हो, उनि प्रायः यसलाई कालो र सेतो को रूप मा हेर्छन - सबै NVMe या केहि पनि नहीं। तर अन्वेषण गर्न एक विशाल खैरो क्षेत्र हो। इन्जिन जसले कुनै पूर्ण हार्डवेयर प्लेटफर्मलाई पूर्णतया क्षमतामा ड्राइव गर्दछ सफ्टवेयर हो। एक नयाँ फाइल प्रणाली र डेटा व्यवस्थापन प्लेटफार्मको साथ NVMe भण्डारण कार्यान्वयन गर्न एक बहु, विश्वव्यापी नामस्थानसँग बहु-स्तरीय भण्डारण वातावरण प्रदान गर्न सक्छ। संगठनहरूले केवल कार्यको लागि आवश्यक भण्डारणका लागि आवश्यक भण्डारणको लागि अन्य भण्डारण विकल्पहरू फाइदा लिन सक्दछन् - डिस्क-आधारित arrays, टेप पुस्तकालयहरू र क्लाउड स्टोरेज सहित - जबकि विशेष कार्यहरूको लागि मात्र NVMe भण्डारणको मात्र आवश्यक खरिद गर्न सकिन्छ। हाइब्रिड स्टोरेज वातावरण सिर्जना गर्न यो क्षमताहरूले संस्थालाई अधिक महंगा फ्लैश-आधारित स्टोरेजको खरीद कम गर्न अनुमति दिन्छ, जबकि अझै पनि उनीहरूको सबै फायदाहरूको आनन्द उठाउँछन्।
सक्रिय हुनुहोस्, प्रतिक्रियाशील छैन
4K सँग मुख्यधारा र 8K चाँडो नयाँ स्तर बन्नु, आजको बिटको दृश्य र योजना भविष्यमा ठूलो बचत कटौती गर्नेछ। फ्ल्यास-आधारित स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूले आज 4K ढाँचाहरू समर्थन गर्ने क्षमता प्रदान गर्दछ, साथै भविष्य सहित
8K र परे। संगठित गर्ने फ्लैश-आधारित टेक्नोलोजीलाई उनीहरूको भण्डारण वास्तुकला समर्थन गर्न राम्रो तरिकाले तैनात हुनेछ र वर्तमान र अर्को पीडित NVMe प्रविधिहरूसँग काम गर्न। र यी प्रणालीको सेवा जीवन विस्तार भएको छ भने, मूल्यह्रास लागत घटाइनेछ - लगानी बढि अगाडी बढ्नेछ।
संस्थाहरूको लागि जुन सीमित वा प्रतिबन्धित फ्लैश इन्भेस्टमेन्ट र डिप्लोइमेन्टको फ्लैश-आधारित स्टोरेजको कथित उच्च लागतको कारणले, मैले निम्न प्रश्नहरू पोष्ट गर्नेछु:
• लागत विश्लेषणले डेटा केन्द्र लागत, कर्मचारी लागत, मूल्यह्रास लागत, र एचडीडी प्रणालीको तुलनामा सञ्जाल लागतको बारेमा के थियो?
प्रति ग्राहक प्रदर्शनको लागि मूल्य कस्तो छ, क्षमता छैन?
यी गहिराइहरूमा अन्वेषण गर्न तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ कि एनईएनएम डिप्टी गर्ने यो उत्तर हो - यसको बावजूद लागतको बावजूद, यसको कारणले। कहिलेकाहीँ सत्य वास्तवमा विवरणमा छ।
जेसन कोरी को बारे मा
जेसन कोइरा, ग्लोबल निर्देशक, उत्पादन र समाधान मा मार्केटिंग मा एस क्वान्टम, टेक्निकल कम्प्युटिंग उद्योगमा एक दिग्गज हो, अग्रणी टेक्नोलोजी विक्रेताओंमा वरिष्ठ बिक्री र मार्केटिङ पदहरूमा 20 वर्ष भन्दा अधिक अनुभवको साथ। जेसनको कम्पनीको उत्पादन र व्यावसायिक रणनीतिले सबै उद्योगहरूमा स्तरीय बाहिर स्टोरेजको नेतृत्व गर्दछ। पहिले, उनले एसजीआई मा विश्वव्यापी भूमिका को विभिन्न प्रकार मा काम गरे, विशेष रूप देखि एचपीसी उत्पादन मार्केटिंग रणनीति को निर्देशित र यूरोपीय र एपीएसी मार्केटिंग संगठन को प्रमुख।
प्रसारण ईन्जिनियर प्रसारण ईन्जिनियरिङ् ग्यामर चापमैनलाई सम्मानित सफ्टएन्टहोम, एमएसटी, सीईएसएक्सएनमक्स स्पियर र तीरहरू भिडियो ईन्जिनियर	2019-06-10
अघिल्लो: लकी फिन प्रोडक्शंसहरू पावर वृत्तचित्रहरूमा इन्डिप्रो उपकरणहरू प्रयोग गर्छन्
अर्को: एटीएससी 3.0: क्रान्तिकारी क्षमतामा बनाउने